Huawei Mate 30 iyo 30 Pro oo leh 5G ayaa laga bilaabay Shiinaha | Androidsis
Huawei Mate 30 oo leh 5G ayaa laga bilaabay Shiinaha
Eder Ferreño | | Huawei, Mobiles
Toddobaadkan 5G wuxuu rasmi ka noqday Shiinaha. Daqiiqado badan oo noocyo badani sugayeen, kuwaas oo hadda bilaabay inay taleefannadooda ku soo saaraan 5G dalka. Mid ka mid ah kuwa ugu horreeya ee tan sameeya waa Huawei. Shirkaddu waxay bixisaa noocyada 5G ee dhammaadkii ugu dambeeyay, qoyska Huawei Mate 30.
Moodooyinka caadiga ah ayaa ahaa kuwa ugu iibsiga badan Shiinaha, sidaan horeyba kuugu sheegnay. Hadda oo 5G laga ganacsadey dalka, waxaa la filayaa in Huawei Mate 30 oo leh 5G ay la kulmi doonaan isla qaddar oo noqon doonaan iibsi cusub oo loogu talagalay nooca Shiinaha. Labada nooc ee qaabka caadiga ah iyo Pro ayaa la sii daayay.
Waan la kulanay saddex nooc oo kala duwan oo ah Huawei Mate 30 5G (8/128 GB, 8/256 GB iyo 8/512 GB). Inkasta oo nooc gaar ah oo ka mid ah Mate 30 Pro la bilaabay, kaas oo ah midka loogu yeero kan ugu caansan noocyadan cusub ee astaanta ah. Tan iyo markii qaabkani leeyahay dhammaan wararka ku jira safka.
Si ka duwan bilowga kale ee Shiinaha, looma baahna in la keydiyo qalabka. Waxaa laga iibsan karaa khadka tooska ah iyo dukaamada hadda si rasmi ah, si dadka isticmaala dalka horay loogu sii qaban karo dhammaadka sare iyadoo 5G ay si rasmi ah u tahay. Dhammaantood waa la heli karaa hadda.
Inkasta oo noocyadan leh 5G laga bilaabay Shiinaha, Yurub gudaheeda waxaan sugeynaa imaatinka Huawei Mate 30. Warbaahinta qaar waxay soo jeedinayaan taas imaan lahaa bartamaha bishan November. Laakiin shirkadda lafteeda ma aysan xaqiijinin wax illaa iyo hadda ku saabsan bilaabista, sidaas darteed waa inaan sugnaa.
Shaki la'aan, dhammaantood waa inay ahaadaan nooc caan ah. Telefoonno wanaagsan, tusaalooyin wanaagsan, iyo suurtagalnimada in badan oo aad jeceshahay. Marka waxaan rajeyneynaa inaan ogaanno goortaan Huawei Mate 30 imaan doono Yurub. Shiinaha dhexdiisa, moodooyinka oo dhan ayaa horeyba loogu heli karaa dhammaan noocyadooda waxayna ballanqaadeen inay ku guuleysanayaan iibka.
Wadada buuxda ee maqaalka: Androidsis » Aaladaha Android » Mobiles » Huawei Mate 30 oo leh 5G ayaa laga bilaabay Shiinaha
Abuur warshado si otomaatig ah u shaqeynaya oo la a Factorio ah The Quarry for Android
Facebook Messenger waxay soo bandhigi doontaa wicitaano laqariyey